Maro Best House Zavamaniry - China Qingdao King Good New Materials
Na dia maro ireo zavamaniry maitso dia afaka mitana toerana madio rivotra, mahomby manala ny andraikitry ny fandotoana an-trano, fa vao nohavaozina ny trano iharan'ny simika fandotoana, aloesy, Chlorophytum, Sansevieria sy ny zavamaniry hafa no tena mahomby voajanahary deodorant.
NASA mpahay siansa rehefa afaka 20 taona ny fikarohana hita fa amin'ny 24 ora jiro fepetra, aloesy iray tavoara monja dia afaka manafoana ny 1 metatra toratelo ny rivotra hita ao amin'ny 90% formaldehyde; vilaniny fandraofan-davenona Chlorophytum Mety ho fatana, fitaovana herinaratra, plastika vokatry ny fizarana ny gazy sy ny azota peroxyde mikeleza aina fatratra reraka, fa koa eny siphon 86% ny formaldehyde; ravina sy ny ravina fototra ravina lehibe dia afaka mandray mihoatra ny 80% ny Indoor gazy manimba. Noho izany, eo amin'ny 15 metatra tora-droa ny efitra fandraisam-bahiny, nambolena roa vilany ny Chlorophytum na Sansevieria, dia afaka mitandrina ny rivotra vaovao, lavitra formaldehyde loza.
Ankoatra izany, dia afaka mandray ny Ivy 90% ny benzene; taretra afaka mitelina ny 70% ny benzene, 50% sy 24% formaldehyde ny trichlorethylene; manga mihantona afaka mitelina 96% gazy, 86% formaldehyde. Raha kumquat, ampongaben-danitra, mirabilis japonica sy Haliotis diversicolor nisy fanoherana mafy ny hydrogène fluoride. Wisteria nanana fanoherana mahery ho solifara karbonika, chlore sy hydrogène fluoride. Camellia, ampongabendanitra, Milan fa tena misy poizina chlore, manana sy ny fanangonan-karena anankiray hisakana ny fiasan'ireny fahaiza; Gardenia, ampongabendanitra, dia afaka mandray an-trano Milan karbonika solifara; Citrus sy Rosemary rivotra an-trano dia afaka manao bakteria sy zavamiaina bitika dia bitika nihena be.
Ankoatry ny etsy ambony dia tsy maintsy ho ao amin'ny mazava toe-piainana dia afaka mandray an-trano manimba entona ao amin'ny maitso fototra napetraka voninkazo, misy voninkazo amin'ny alina mba hanadio ny rivotra, izay fahita matetika karazana volontsôkôlà palmie, fohy manga garnish, mivatra Gaelan , Day, kapoaka miendrika fakany, nambolena mananasy sy tigra Pilan sy ny sisa. Ankoatra izany, ity karazana zavamaniry koa tena mazava tombony - tsotra fambolena sy ny fikojakojana, izay matetika no nilaza fa ny voninkazo "tsara miandry."